Lenjii hubannoo seeraa hawaasaaf qopha’ee. – Waajjira Alangaa Godina Jimmaa.
Posted bymhaagj March 20, 2021 December 3, 2021 Posted inUncategorized
Sensa leenjii hubannoo seraa haawaasaaf kennamuu.
lenjii youtube Presentation (1)Download
Kabajamtoota daawwattotaafii hordoftoota website mana hojii abbaa alangaa godina jimmaa. Dura dursoo nagenyi kessan akkami jechun nagaa isiniittii dhaammanaa. Akkuma beeytan manni hojii abbaa alangaa godina jimmaa haala adda ta’eefi biyyaa Itiyoophiyaa fi naannoo oromiyaa kessatti hinbaramneen platfoormii interneetii fayyadamuun haawasa bal’aaf carraa hubannoo seeraa ittii argatu mijeessuu irratti carraaqii hammana hin jedhamnee taasisuttii jira. Akka qorannoon adda addaa agarsiisu lakkofsii namootaa interneetii fayyadamuu Itiyoophiyaa kessatti haalaan ida’aa jiraachuu isaatin ummannii miliyona 30ttii dhihaatuu platformii interneti fayyadamaa jira. Kana kessaa parsantii 75 ol ta’u platformii marsariitii haawaasaa kan fayyadamuu dha. Haata’uu malee biyya itiyophiyaa kessattis ta’e naannoo keenyatti platformii kannin fayyadamun barrulee fi vidiyoolee bekkumsa horsiisu keennuu waan hinjirref ykn akkaan gadibu’aa waan ta’eef hawaasnii bal’an akka kuni carraa bekkumsaa argachuu mannaa yaaciifii waan hintaanee ilaaluun yeeroo isaa qaalii ballessaa jira.
Akkuma suuraa armaan oliitti argitanittii guddinnii hawaasa interneti fayyadamuu haalaan guddatus qaamnii haawasa kanaaf hubnanoo ykn beekkumsa keennuuf platfoormii kanniin fayyadamaa jiruu akka biyyaattii hanqina hangana hinjedhamnee yoo qabuu akka Oromiyaatti ammoo gonkumaa gin jiruu jechuun ni danda’maaa.
Faallaa biyya kenyaatiin biyyonnii guddatanis ta’ee biyyota guddachaa jiran yoo ilaallee platforomii platfoormii kana fayaydamuun seeraafii barnoota biroo kan barsisaan miliyoonaan kan argamuu yoo ta’u bayyinnii ammoo dhaabbata ummataatii. Biyyota gudadtan dhisnee biyyoota sadrkaa kenyaattii argaman kan akka kenyaa fi ugandaa yoo fudhannee chanaalii you tube kuma 10 ol jiruu seera barsiisuu irrattii fulleffachuun kan banameedha. Nutis 1ffaa carraa hawaasa bal’a kanaaf beekuumsa isaa dagaagsuuf, 2ffaa hnannaqi akak biyyaafii akka naannoottii mul’atuu furuun patfloormii internetetii platfoormii bekkumsii ittin argatamuuu gochuuf jecha kallattii heddun dhufnee jirraa. Sochii kenya kessaa agarsiiftuun tokko lenjii hubannoo seeraa ittii fufinsaan keennuuf jalqabuu kenya. isinis vidiyoo hubannoo sweraa kana daawwachuun yaada kessan nuff lachaa hubannoo kessan gabbisaa jrnna
One thought on “Lenjii hubannoo seeraa hawaasaaf qopha’ee.”
abduselaam Mohammed says:
hojii baay’ee gaariidha. jabaadhaa baayyee namatti tolaa.